Adduunka Waddamada Ugu Biyaha Yar: Qalinkii Abdirashid M. Jama Belel | ToggaHerer
← Taariikh Nololeedkii Sheekh Cali Xaaji Ibraahim Xirsi 1905-1984. W/Q:C/raxmaan Axmed Koosaar Qaybta Koobaad
Falanqeynta Buugga Af-Dhaab Qalinkii Cabdinaasir Axmed Abraham →
Published on April 15, 2018 by Magan
Dalalka adduunka oo ay biyo-yaridu heysto waxaa ugu horreeya kuwa afrikaanka ah iyo guud ahaan kuwa kale ee soo koraya. Waddamada ku yaala Bariga Dhexe iyo Wuqooyiga Afrika ayaa ah kuwo ay biyo-la’aantu aad u saameyso. Israa’iil iyo Jordan oo labadaba ku yaala Bariga Dhexe waxay ka mid yihiin waddamada ugu biyaha yar dunida. Arrintani waxa ay sababtay in israa’iiliyiintu ay dib u isticmaalaan biyihii ay horey u cabbeen.
Waddanka Jabuuti ee aynu jaarka nahay ma u malaynaysaa in uu noqday waddanka ugu biyaha yar adduunka. Biyaha ay isticmaalaan reer Jabuuti qaarkood waxay ka yimaadaan biyaha badda oo la macaaneeyey ama cusbada laga saaray, ayaga oo maalin walba soo saara 400 m3 oo biyo oo cusbada laga saaray. Kheyraadka biyaha ee Jabuuti waxaa lagu qiyaasay 10 milyan m 3 oo keliya, waxa kale oo xusid mudan in dhawaan Jabuuti uu waddanka Itoobiya ceelal uga ogolaaday in ay ka qotaan gudaha dalka Itoobiya. Qoraalka af-ingiriiska ah ee hoos ku qoran oo mardhaw la soo saaray waxa uu caddeynayaa in baadhis iyo saadaalin mardhaw la sameeyey ay sheegeyso in shanta waddan ee ugu soo horreysa ee tobanka sano ee soo socda ku biiri doona waddamaha ay biyola’aantu haysato ay shantooduba ku yaalaan qaaradda Afrika, dhulka soomaalidu degtaana ku jiro waddamadaas. waxaa kaloo ka mid ah Kenya, Marooko, Ruwaanda iyo Koonfur-Afrika.